Mpanamboatra JACKET - Mpamatsy JACKET China & Factory
Lehilahy ivelany rivotra wind jack ...
Tshirt fanatanjahan-tena farany ...
100% Polyamide tantera-drano ...
Manome kalitao avo lenta ny ...
MenS 3 in 1 palitao orana Custom OEM akanjo ivelany akanjo tsy miova
Ny fanamiakan'ny kodiarana 3-in-1 dia afaka amboarina mba hanamafisana ny fiarovana sy ny fiononana. Mora hiatrehana ny toetr'andro mora izy io, toy ny zavona matevina, orana na oram-panala. Skizy midina, snowboarding, tendrombohitra, fitsangantsanganana, fitsangatsanganana, fanatanjahan-tena an-kalamanjana amin'ny ririnina ary fotoana samihafa.
Jereo ny palitao vita amin'ny landihazo tsara indrindra amin'ny mpivarotra tsara indrindra.
Ny kilaon-doko Mens Cotton JacketTo dia manome hazavana sy azo amboarina, ny palitao vita amin'ny 100% dia pataloha tsy maintsy ilaina ao amin'ny lobakao lohataona sy fararano. Ny fehiloha vita amin'ny karazana bokotra fanampiny dia manana endrika volon-tànana miaro, misy fehiloha tsy hita maso sy paosy maro be. Ity palitao ity dia manana ny kinova mahazatra sy ny kinova namboarina
Ny fehikibo makiazy ambany ririnina ho an'ny lehilahy
Izahay dia orinasa manana matihanina manana rafitra famokarana feno sy mpamorona matihanina. Ny palitao mens down dia malaza be any ampitan-dranomasina ary manaiky fomba na fomba namboarina. Ny palitao mitanondrika dia rivotra sy tsy fahita rano, azafady mba mifandraisa aminay raha mila fitakiana ianao
Lehilahy manana kalitao avo lenta dia mitafy palitao mba hafana sy matevina foana
Ny akanjon'ny mens down dia dikan-teny mahazatra izay afaka manafana anao amin'ny vanim-potoanan'ny fararano nefa tsy hahatsapa ho lehibe ianao. Io vest-toeran'ny ranomaso io dia mora apetaka ary mampiasa insulation down goose mba hitafana anao ny hafanana rehefa any ivelany. Ity vest ity dia mora mitahiry, ka afaka miomana ianao na dia eny an-dalana.
Man palitao mafana ny palitao Fleece manohana fividianana be
Ity palitao Fleece ity dia ilaina amin'ny fitazonana anao raha mafana ny rivotra. Amin'ny toetr'andro mangatsiaka dia azonao atao ny manao palitao hafa hanafana anao. Homena anao ny vidiny tsara indrindra amin'ny fividianana betsaka
Lehilahy avo lenta SoftshellJacket ivelany
Ny palitao malefaka satroka manana palitao mafana sy versatile izay mampitombo ny fampiononana sy ny fampisehoana. Ny hem, ny hood azo ovaina ary ny firakotra DWR dia manome fanoherana rivotra sy rano tsara, raha elastika sy voatonona ary azo entina miaraka aminao ny lamban'ny vatana. Tsara ho an'ny fanatanjahan-tena izany, nefa misy toerana kely fanampiny, ka rehefa ratsy ny andro dia azonao atao ny manaparitaka azy.
Lehilahy ivelany akanjo fiarovan-tsoavaly avo lenta matihanina
Na dia mieritreritra aza ianao fa mety ny sosona, indraindray ny rivotra dia afaka mampangatsiaka azy. Na eny an-tampon-kavoana iray ianao any amin'ny firenena, na mandeha amin'ny alikanao any an-trano, dia afaka mahazo tombony amin'ny lozoboky ny rivotra izahay, izay manampy anay amin'ny hafana sy maina. Manolotra karazan'akanjo sy palitao farany an'ny lehilahy farany indrindra izahay natao hamandrihana amin'ny hafanana sy hitahirizana ny rivotra.
Ski palitao matihanina matihanina avo lenta sy azo itokisana
Ny palitao fanaovana ski mens dia natao ho an'ny tontolo iainana faran'izay mafy ary voatenona amin'ny lamba malefaka ary feno fitaovana malefaka. Manana satron-kofehy izy ireo, pataloha lava miaraka amina fehin-kibo anatiny, fantsom-baravarankely misy eo ambanin'ny sandriny, zam-panala misy ronana, boloky goggles ary zipo tsy azo tanterahina amin'ny paosy roa. Fiasa ara-teknika miaraka amin'ny fahalalahana mivezivezy indrindra toy ny kiho azo avela